သငျ့ရဲ့လုပျငနျးခှငျအတှငျး အလုပျမြားမြားပွီးမွောကျနိုငျဖို့ အလှယျတကူပွုလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးမြား။ – SoShwe
Home/LifeStyle/သငျ့ရဲ့လုပျငနျးခှငျအတှငျး အလုပျမြားမြားပွီးမွောကျနိုငျဖို့ အလှယျတကူပွုလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးမြား။
သငျ့ရဲ့လုပျငနျးခှငျအတှငျး အလုပျမြားမြားပွီးမွောကျနိုငျဖို့ အလှယျတကူပွုလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးမြား။
၁။ နတေ့ဈနရေဲ့ အစောပိုငျးအခြိနျမှာ ခတ်ေတခဏ အနားယူပေးပါ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတဈခုအရ မနကျပိုငျး ရုံးရောကျတဲ့အခြိနျကနေ နလေ့ညျစာစားခြိနျအတောအတှငျး ခတ်ေတခဏအနားယူခွငျးဟာ အကောငျးဆုံးအခြိနျပဲဖွဈတယျဆိုပွီး ဖျောပွထားပါတယျ။ အခြိနျအကွာကွီး အနားယူမယျ့အစား အခြိနျနညျးနညျးနဲ့ မကွာခဏအနားယူပေးခွငျးဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာသာမက ခန်ဓာကိုယျပိုငျးဆိုငျရာအတှကျပါ လိုအပျတဲ့ ခှနျအားတှကေို ပိုမိုဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျပါတယျ။ “ လကျကိုငျဖုနျးတှနေဲ့မတူတဲ့အခကျြက မြားသောအားဖွငျ့ လူတျောတျောမြားမြားဟာ လကျကိုငျဖုနျးကို အားကုနျတဲ့အထိ အသုံးပွုပွီးမှ အားပွနျသှငျးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတှအေနနေဲ့ကတော့ နတေ့ဈနလေုံ့း ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ လုပျဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ Energy တှကေို ကုနျသညျအထိ အသုံးမပွုဘဲ မကွာခဏဆိုသလို အနားယူပေးဖို့လိုအပျပါတယျ . . . ” ဆိုပွီး သုတသေနပွုလုပျသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ အီမလီဟနျတာက ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
၂။ တိရိစ်ဆာနျလေးတှရေဲ့ပုံကို ကွညျ့ရှုပေးပါ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတဈခုအရ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှဖွေဈတဲ့ ကွောငျလေးတှေ၊ ခှေးလေးတှပေုံကို ကွညျ့ရှုပေးခွငျးအားဖွငျ့လညျး သငျ့ရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို အလှယျတကူ ပွီးမွောကျအောငျမွငျနိုငျအောငျ လုပျဆောငျနိငျဖို့အတှကျ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
၃။ ပီကေ ဝါးပါ။
တကယျလို့ ပီကဝေါးခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှေ ပွီးမွောကျအောငျ ကူညီပေးနိုငျတယျဆိုရငျတော့ ပီကဝေါးခွငျးကို မကောငျးတဲ့အလအေ့ကငျြ့လို့ သတျမှတျလို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သုတသေနပွုလုပျသူတှကေလညျး စတငျလလေ့ာပွီး သူတို့တှရှေိ့ခကျြတှကေို ယခုလို ပွောပွထားပါတယျ။ “ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ပီကဝေါးပွီး အလုပျလုပျခွငျးဟာ အလုပျတှကေို ပိုမိုပွီးမွောကျစပေါတယျ။ အဲ့ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြနဲ့ ထပျတူကပြါတယျ. . . ” ဆိုပွီး ပရောဖကျဆာ အနျဒရူးစမဈမှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ “ ပီကဝေါးနခွေငျးဟာ ဦးနှောကျထဲရှိ အာရုံကွောတှကေို လှုံ့ဆျောပေးနပွေီး ထိုမှတဈဆငျ့ ဦးနှောကျရဲ့ အလုပျလုပျနိုငျမှုစှမျးအားကို ပိုမို မွငျ့တကျစပေါတယျ . . .” ဆိုပွီး အနျဒရူးမှ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၄။ သငျ့ရဲ့အခြိနျတှကေို ကနျ့သတျထားပါ။
သငျ့ရဲ့အလုပျခြိနျတှကေို (၂၅)မိနဈ တဈပိုငျးစီ ကနျ့သတျပွီး ခတ်ေတခဏ အနားယူတာမြိုး ပွုလုပျပါ။ အဲ့ဒီကနျ့သတျထားတဲ့ အခြိနျအတိုငျးအတာမှာလညျး ကိုယျလုပျစရာရှိတာတှကေို အာရုံစူးစိုကျပွီး ပွုလုပျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ နောကျပွီး အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စရပျတှကေို ဦးစားပေးပွုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့လညျး သငျ့လုပျငနျးဆောငျတာတှေ အလှယျတကူပွီးမွောကျဖို့ အထာကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
၅။ (၂) မိနဈစညျးမဉျြးအတိုငျး လုပျဆောငျပါ။
အချြိနျ စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြပညာရှငျနဲ့ အောငျမွငျတဲ့ စာရေးဆရာဖွဈသူ ဒေးဗဈအယျလနျမှ အခြိနျကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုကို ခပြွခဲ့ပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ အလုပျတဈခုဟာ (၂)မိနဈအတှငျး ပွီးမွောကျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျတယျလို့ ထငျမွငျယူဆတယျဆိုရငျ ထိုအလုပျကို အရငျဦးဆုံးပွုလုပျပေးပါ။ “ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ လုပျဆောငျရမယျ့ အလုပျကိစ်စလေးတှကေို အပိုငျးလေးတှပေိုငျးပွီး တဈပိုငျးကို အချြိနျ (၂)မိနဈစီ သတျမှတျပွီး လုပျဆောငျပါက သငျ့ရဲ့ အလုပျတှကေို ပိုမိုပွီးမွောကျအောငျမွငျနိုငျပါတယျ . . .” ဆိုပွီး အယျလနျမှ success.com နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်များများပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ။
၁။ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အစောပိုင်းအချိန်မှာ ခေတ္တခဏ အနားယူပေးပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ မနက်ပိုင်း ရုံးရောက်တဲ့အချိန်ကနေ နေ့လည်စာစားချိန်အတောအတွင်း ခေတ္တခဏအနားယူခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး အနားယူမယ့်အစား အချိန်နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏအနားယူပေးခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပါ လိုအပ်တဲ့ ခွန်အားတွေကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ “ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်က များသောအားဖြင့် လူတော်တော်များများဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အားကုန်တဲ့အထိ အသုံးပြုပြီးမှ အားပြန်သွင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေအနေနဲ့ကတော့ နေ့တစ်နေ့လုံး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Energy တွေကို ကုန်သည်အထိ အသုံးမပြုဘဲ မကြာခဏဆိုသလို အနားယူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး သုတေသနပြုလုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အီမလီဟန်တာက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
၂။ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ပုံကို ကြည့်ရှုပေးပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ ကြောင်လေးတွေ၊ ခွေးလေးတွေပုံကို ကြည့်ရှုပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အလွယ်တကူ ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
၃။ ပီကေ ဝါးပါ။
တကယ်လို့ ပီကေဝါးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပြီးမြောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပီကေဝါးခြင်းကို မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်လို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သုတေသနပြုလုပ်သူတွေကလည်း စတင်လေ့လာပြီး သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေကို ယခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ “ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပီကေဝါးပြီး အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာ အလုပ်တွေကို ပိုမိုပြီးမြောက်စေပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နဲ့ ထပ်တူကျပါတယ်. . . ” ဆိုပြီး ပရောဖက်ဆာ အန်ဒရူးစမစ်မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ပီကေဝါးနေခြင်းဟာ ဦးနှောက်ထဲရှိ အာရုံကြောတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနေပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားကို ပိုမို မြင့်တက်စေပါတယ် . . .” ဆိုပြီး အန်ဒရူးမှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၄။ သင့်ရဲ့အချိန်တွေကို ကန့်သတ်ထားပါ။
သင့်ရဲ့အလုပ်ချိန်တွေကို (၂၅)မိနစ် တစ်ပိုင်းစီ ကန့်သတ်ပြီး ခေတ္တခဏ အနားယူတာမျိုး ပြုလုပ်ပါ။ အဲ့ဒီကန့်သတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာမှာလည်း ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ဦးစားပေးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း သင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အလွယ်တကူပြီးမြောက်ဖို့ အထာက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
၅။ (၂) မိနစ်စည်းမျဉ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
အချိ်န် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်သူ ဒေးဗစ်အယ်လန်မှ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အလုပ်တစ်ခုဟာ (၂)မိနစ်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတယ်ဆိုရင် ထိုအလုပ်ကို အရင်ဦးဆုံးပြုလုပ်ပေးပါ။ “ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်ကိစ္စလေးတွေကို အပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီး တစ်ပိုင်းကို အချိ်န် (၂)မိနစ်စီ သတ်မှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါက သင့်ရဲ့ အလုပ်တွေကို ပိုမိုပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး အယ်လန်မှ success.com နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous တဈကိုယျတျော မိုငျပေါငျး ၁၃,၅၀၀ ကြျော ခရီးနှငျခဲ့တဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျသူတဈဦး။
Next အမြိုးသားအမြားစုဟာ ခဈြသူ၊ ရညျးစား ဆကျဆံရေးထကျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကို ပိုမိုအလေးထား။